Dowladda Riddada iyo AMISOM oo bilaabay in ay Barakiciyeen Dadka ku nool Xeradii hore ee Afisyooni magaalada Muqdisho. | Halganka Online
Dowladda Riddada iyo AMISOM oo bilaabay in ay Barakiciyeen Dadka ku nool Xeradii hore ee Afisyooni magaalada Muqdisho.
Dowladda Ridda iyo gaalada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa bilaabay in ay dhibaateeyaan dadka Barakacayaasha ah ee ku nool xaafada Afisyooni degmada Waaberi magaalada Muqdisho.
Maamulka Gobalka Banaadir u qaabilsan Kooxda Riddada Shariif Axmed ayaa soo saaray go’aan guryaha cooshadaha ah looga Burburinayo Barakacayaasha ku dhaqan Afisyooni iyagoo ku marmarsiyoonaya in ay wax udhimayaan amaanka Garoonka Muqdisho oo fariisin u ah gaalada AMISOM.
Nin lagu magacaabo Eng,Nuune oo kooxda riddada ugu magacaaban gudoomiyaha gobalka Banaadir ayaa sheegay in cagta lamarin doono cooshadaha barakacayaasha ay ka dhisteen xeradii hore ee Afisyooni.
Dowladda Ridadad ayaa si fulaynimo ah u sheegtay in Barakacayaasha Afisyooni ay xariir laleeyihiin Xarakada Shabaabul Mujaahidiin taas oo ah been weyn oo ladoonayo in lagu banaysto hantida Dadka Barakacayaasha ah.
Dagaalyahanada Xisbul islaam ayaa iyana dhankooda sheegay in ay difaaci doonaan Barakcayaasha hadii maleeshiyaadka Riddada ah isku dayaan in ay xoog ku Burburiyaan cooshadaha Barakacayaasha.
« Qabuura Galeenka Galguduu oo qarka u saaran in ay dhaxdooda dagaalamaan iyo Shabaabul Mujaahidiin oo dhaq dhaqaaqyo wado. Dowladda Gaala raaca Jabuuti oo joojisay Ciidan ay usoo diri lahayd Magaalada Muqdisho si ay shacabka u xasuuqaan. »